३ वर्ष पहिले मृत्यु भयो भनेर अन्तिम संस्कार गरिएका छोरा लकडाउनमा अचानक जिउँदैघर आउदा परिवारमा खुसीको सिमा नै रहेन….. – Dainik Sangalo
३ वर्ष पहिले मृत्यु भयो भनेर अन्तिम संस्कार गरिएका छोरा लकडाउनमा अचानक जिउँदैघर आउदा परिवारमा खुसीको सिमा नै रहेन…..
September 28, 2020 1026
को’रोना भा’इरसको सं’क्रमणले कतिपय मानिसलाई परिवारबाट टाढा बनाएको छ भने कतिको ज्या’न पनि लिएको छ। तर भारतको मध्य प्रदेशको छतरपुरमा को’रोनाको म’हामारीका बीच एक परिवारले मृ’त्यु भएको भनिएका छोरा जि’उँदै भेटेका छन्। छतरपुरको बिजावर क्षेत्रमा तीन वर्ष पहिले बिजावरको एक जंगलमा कं’काल भेटिएको थियो। जसको पहिचान भगोला आदीवासीले आफ्नो छोराको रुपमा गरेका थिए। परिवारले उक्त कं’कालको छोराकै रुपमा अ’न्तिम सं’स्कार गरेका थिए।
अ’न्तिम सं’स्कार गरेको ३ वर्षपछि छोरा जि’उँदै घर फर्कएपछि परिवारमा खुसीको सिमा छैन्। को’रोना सं’कटका बेला लकडाउनले अ’लप’त्र परेका कयौँ राज्यमा मजदूरलाई घर फर्काउने क्रममा भारतको डिलारी गाउँका एक युवक उदय आदिवासी आफ्नो घर फर्किएपछि परिवार चकित बनेको हो। छोरा म’रेको भनेर अ’न्तिम सं’स्कार गरेका उनका पिताले छोरालाई अचानक आफ्ना अगाडि पाउँदा निकै खुसी भएवास्तवमा ती युवकले परिवारसँग रि’साएर हरियाणाको गुरुग्राम गए। र त्यही एउटा फ्याट्रीमा काम गर्न सुरु गरे। लकडाउनसँगै फ्याट्री ब’न्द भएपछि उनी आफ्नो घर फर्किएका हुन्।
सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्दा पालना गर्नुपर्ने १५ निय१. म पर्याप्त भेन्टिलेसन भएको कोठामा एक्लै बस्नेछु र यो सम्भव नभएमा छुट्टै ओछ्यानमा सुतिरहेको अर्को व्यक्तिसँग कम्तिमा १ मिटर दूरी राख्नेछु ।
८. म अन्य व्यक्तिहरूसंग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने छैन ९. यदि अन्य व्यक्तिहरूसंगको सम्पर्कमा आउनु पर्दा म कम्तिमा १ मिटर (३ फिट) को दुरी राख्नेछु र म अर्को व्यक्तिसँग एउटै कोठामा हुँदा र स्वास्थ्य संस्था जाँदा मास्क लगाउनेछु ।
१२. म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनहरूको पालना गर्नेछु र आवश्यक सहयोगको लागि सधैं तयार रहनेछु १३. म क्वारेन्टाइनमा रहँदा आफ्नो शरीरको तापक्रम दैनिक एक पटक जाँच्नेछु र दिइएको फाराममा रेकर्ड गर्नेछु । मलाई दिईएको निर्देशन अनुसार १४ दिनसम्म मेरो दैनिक स्वास्थ्य स्थिति बारे तोकिएको स्वास्थ्य निकायमा जानकारी दिनेछु १४. कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या देखिएको खण्डमा वा क्वारेन्टाइनमा बस्दा अन्य केही समस्याहरू भएमा तोकिएको स्वास्थ्य निकायवाट प्राप्त निर्देशनहरू अनुरूप गर्नेछु १५. म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसंगको पूर्व अनुमति बिना क्वारेन्टाइन स्थान भन्दा बाहिर यात्रा गर्ने छैन । आवश्यक भएमा यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ ।
Prevगर्भवतीलाई कोरोना, अस्पतालले उपचार गर्न नमानेपछि बिजोग
Nextचलचित्र ‘ए मेरो हजुर ४’ मा दुर्गेश थापाको गीतसँगै अभिनय पनि
काभ्रेपालन्चोकबाट आयो यस्तो दुख’द खबर ! जेठाजुद्वारा आफ्नै बुहारीको वि’भत्स ह’त्या
आजको राशिफल : वि.सं.२०७७ साल फाल्गुन ०६ गते । बिहीबार । ईश्वी सन् २०२१ फेब्रुवरी १८ तारिख
पहाड खोतल्ने स्काभेटर र टिप्परको यो हाल (फोटो फिचर)
विप्लवका छोरा प्रकाश चन्दलाई आयो भारतीय गु,ण्डाको ध, म्कीपूर्ण फोनकल (अडियो रेकर्डसहित)